सुरक्षाको जोखिमका कारण हजारौं पर्यटक काश्मिरबाट बाहिरिए
स्थानीय अधिकारीले सुरक्षाको जोखिमबारे चेतावनी दिएपछि दशौं हजार पर्यटक, तीर्थालु र कामदारले काश्मिर छोड्न थालेका छन्। उक्त क्षेत्रमा भारतले कम्तिमा पाँच लडाकू मारिएको जनाएको छ।
“बम विस्फोट, ग्रिनेड आक्रमण, गोली प्रहार र अपहरण लगायत हिंसाको जोखिम” उल्लेख गर्दै विदेश कार्यालयले जम्मू‑काश्मिरका सबै यात्रा रद्द गर्न शनिबार सुझाव दिएको छ।
जर्मनी र अष्ट्रेलियाले पनि आफ्ना नागरिकलाई यस्तै किसिमको चेतावनी दिएको छ।
आक्रमणको योजनाबारे प्रमाण फेला पारेपछि भारतीय सुरक्षा अधिकारीले मानिसहरूलाई काश्मिर उपत्यका छोड्न निर्देशन दिएको हो। पाकिस्तानी सेनाको समर्थन पाएको लडाकूले अगष्ट महिनाको मध्यसम्म सकिने हिन्दु धर्मावलम्बीको एउटा प्रमुख तीर्थ अमरनाथ यात्रा लक्ष्य बनाएको अधिकारीले बताएका छन्। काश्मिर मुस्लिम बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो।
अधिकारीहरूले तीर्थयात्रा पनि रद्द गरेका छन्। उनीहरूले तीर्थयात्री र पर्यटकलाई घर फर्कन आग्रह गरेका छन्। यसले आगन्तुक आत्तिएका छन्। यातायातको प्रबन्ध मिलाउन आगन्तुकलाई निकै सकस छ। बेग्लै सरकारी सूचनाले भारतका अन्य राज्यबाट आएका विद्यार्थीलाई हिमाली उपत्यका छाड्न सल्लाह दिएको छ।
मुख्य शहर श्रीनगरस्थित विमानस्थलमा केहि विदेशी लगायत चिन्तित यात्रुको भीड थियो। धेरैसँग त्यो दिनको टिकट थिएन।
“केहि समयपछि फर्किने योजना बनाएका यात्रु पनि अत्तालिएर आज विमानस्थल आएका छन्,” दिल्ली‑श्रीनगर उडान सञ्चालन गर्ने एउटा एयरलाइनका प्रबन्धकले बताए। “परिस्थिती निकै अस्तव्यस्त छ। थप उडानको प्रबन्ध नभए धेरैले सिट पाउने छैनन्।”
काश्मिर बाहिरका सयौं विद्यार्थीलाई बसबाट पठाइएको छ। “सबै गैरस्थानीय विद्यार्थी आ‑आफ्नो स्थानतर्फ गएका छन्,” श्रीनगरस्थित नेसनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीका एक प्रशासकिय अधिकृतले बताए।
पाकिस्तानलाई आधार बनाएका लडाकूले काश्मिरको शान्ति भङ्ग गर्न र तीर्थालु लक्ष्य बनाउने थुप्रै प्रयास गरेको श्रीनगरस्थित भारतीय सेनाका प्रवक्ता कर्णेल राजेश कलियाले बताए। भारतीय रक्षा दललाई आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दा पाँचदेखि सात जना मारिएको पनि उनले जानकारी दिए। कारवाहीमा हातहतियार र गोलीगठ्ठा बरामद गरिएको कलियाले बताए।
पाकिस्तानी रक्षा दलका एक अधिकारीले भारतीय पक्षको अभिव्यक्ति “मात्रै प्रोपागाण्डा” भएको र “सरासर झूठ” भएको बताएका छन्।
काश्मिरका स्थानीय उच्चपदर्थ अधिकारीले २० हजार हिन्दु तीर्थालु र पर्यटकमध्ये अधिकांश र दुई लाखभन्दा धेरै श्रमिक त्यहाँबाट बाहिरिदैं गरेको बताएका छन्।
अमरनाथ यात्राले आगन्तुकको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा निकै बढाएको छ। हिमालयमा पर्ने अमरनाथ तीर्थयात्रामा तीन लाखभन्दा धेरै हिन्दु धर्मावलम्बी सहभागी हुने गरेका छन्। सुरक्षाको जोखिमबारे चेतावनी जारी गर्नुअघि पनि निकै कडा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको थियो। जम्मू क्षेत्रको अर्को तीर्थ मचैल माता यात्रा पनि शनिबार रद्द गरिएको छ।
चेतावनी जारी भएपछि शुक्रबार राति पेट्रोल स्टेसन, खाद्य स्टोर र बैंकको क्यास मेसिनबाहिर स्थानीय काश्मिरीको लामो लाम देखिन्थ्यो। शनिबारदेखि त्यस्तो लाम कम भएको छ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि काश्मिर विभाजन भएको थियो। तर दुवै देशले काश्मिर आफ्नो राज्य भएको दाबी गर्दै आएका छन्। काश्मिरलाई लिएर दुई देशबीच दुई पटक लडाइँ पनि भएको छ।
भारत सरकारले एक साता अघि नै थप दश हजार सेना काश्मिर पठाइएको जनाएको छ। त्यहाँ पहिले नै पाँच लाख सेना तैनाथ छन्। सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार थप २५ हजार सेना पठाउने निर्दशन जारी भएको छ। थप कति सेना खटाइए भन्नेबारे सरकारले केही बताउन चाहेन।
सेना अधिकारी र राज्य सरकारले सुरक्षाको जोखिम औंल्याए पनि काश्मिरका नेताले थप भारतीय सेनाको परिचालन हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारले संविधान अन्तर्गत काश्मिरको विशिष्ट हैसियत हटाउने जोखिमको सङ्केत भएको जनाएका छन्।
द गार्डियनबाट अनुवाद
Published Date: Monday, 5th August 07:01:50 AM
नियमित व्यायामले महिलाको मुटु रोग र क्यान्सरको जोखिम घटाउने
पर्मानेन्ट हेयर डाइ र स्ट्रेटनरले स्तन क्यान्सर हुनसक्ने अध्ययनको ठहर
बलात्कार आरोपी नित्यानन्दले घोषणा गरे टापु किनेर इक्वेडर नजिकै हिन्दू देश !
इतिहासकै गर्मी दशकले के समस्या ल्याउला?
श्रीलंकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै चीन र भारतसँगको सम्वन्ध के होला?
चीनमा फोन प्रयोगकर्ताका लागि फेस स्क्यान अनिवार्य
युरोपेली संघको नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो महिलाको कथा
अध्ययन भन्छ- पर्याप्त व्यायाम गर्दैनन् किशोरकिशोरी
भेटियो चार करोड चालिस लाख वर्ष पुरानो क्याटरपिलर